WhatsApp Webhu, ongororo yakaoma uye mashandisiro ChitChat | IPhone nhau
Vanopfuura mumwe vakaisa poker kumeso apo vanhurume veWhatsApp vakazivisa kuti WhatsApp Web yaiwanika kune ese masystem anoshanda masisitimu zvachose uye nekuve nawo, kunze kweiyo chaiyo yakazvara WhatsApp, paIOS. Iyi ingori nyaya ye imwe yehutsinye hwakawanda kuti vakomana kubva kuWhatsApp vakaita kuIOS kubva pavakafunga kuti vateereri vavo vaive Android. Zvaive nyore sei kukanda mabhora kunze uye pasina kupa tsananguro yehunyanzvi yekupomera Apple yekudzivirira iyi mhando yemhinduro kuti ishandiswe muWhatsApp vatengi veIOS. Ndiri kuzotaurawo nezvazvo ChitChat, chishandiso cheMac chinotibvumidza kushandisa zvakajeka WhatsApp Web pasina kuvhura chero browser.
1 WhatsApp Webhu, chii chaive chikonzero?
2 ChitChat, maitiro ekushandisa WhatsApp Webhu mune fomu rekunyorera
WhatsApp Webhu, chii chaive chikonzero?
Sekureva kwenhau zhinji dzakasarudzika, timu yekusimudzira yeWhatsApp payakaburitsa WhatsApp Web yezvigadzirwa zvese yaive nechikonzero chakakwana chekusiya iOS kunze. Uku kwaive kutaura kuti maererano nenzira idzi WhatsApp inoitwa panenyaya iyi:
Iyo multitasking APIs muIOS inotibvumidza isu kuti tiite mamwe mabasa akasarudzika kana iko application iri kumashure. Kune izvo WhatsApp inoedza kuita, chishandiso cheIOS chinofanira kukwanisa kuchengetedza kubatana kwakashama kuseva, kana kutambira zvinopinda zvinopinda kubva kubhurawuza, zvisinei nekuti mushandisi akaisa application kumashure.
Ehe zvakanaka hapana chinoratidzika kunge zvachinja kubva ipapoZvakare, iyo WhatsApp Web basa yakakurumidza kuwanikwa kuti kana yaisanganisira mukodhi yekushandisa yeIOS, zvisinei, yakaramba iri mumenu yakavanzwa yanga isingawanikwe mune yepamutemo vhezheni yeWhatsApp uye kuti nharaunda nekukurumidza Jailbreak yakatsaurirwa kuita pachena. . Kubva ipapo, vashandisi vazhinji (pakati pavo vandiri) vakafarira WhatsApp Web nekuisa yakakodzera tweak uye pasina chero chinoratidzika dambudziko, vachibvumidza iyo application kumhanyisa WhatsApp Web nenzira chaiyo yakafanana yemvura uye yakagadziriswa seyatinoona izvozvi yakaburitswa. zviri pamutemo. Iye zvino tichazosara tichishamisika kuti nei timu yekusimudzira ye WhatsApp yakasarudza kubvisa vashandisi veIOS chinhu ichi, iyo inoita kunge inopinda zvakanyanya kuchisarudzo chakareruka, kana ndiani anoziva, ivo vakasarudza kupa pekutanga kune vamwe vashandisi uye nokudaro kurerutsa mutoro wemaseva kusvikira vaine chokwadi chekuti zvese zvinoshanda sezvazvinofanirwa kuita.
Izvo zviri pachena ndezvekuti WhatsApp yazvidza zvakare vashandisi veIOS, iyo inoshanda sisitimu iyo yakabereka kunyorera uye iyo yakasimudzira chishandiso nemari yakakwana kuti ive inozivikanwa uye kukura, nekuti ngatirege kukanganwa kuti nepo vashandisi Symbian semuenzaniso vakanakidzwa nechishandiso. yemahara uye isina muganho, vashandisi veIOS vaifanira kubhadhara € 0,99 kuti vanakirwe nayo. Mari hachisi chikonzero chekunyunyuta, sezvo vashandisi vanga vachiinakidzwa kubvira payakatangwa nemultipuratifomu vane account inonzi "piyona" iyo inoona sevhisi yemahara yehupenyu, asi idudziro yakakodzera kuongororwa.
ChitChat, maitiro ekushandisa WhatsApp Webhu mune fomu rekunyorera
Kwenguva yakareba takave nechikumbiro paMac chinobvumira vashandisi veWebhu Webhu kuti nakidzwa nechinhu ichi natively muchimiro chekushandisa muOS X inoshanda sisitimu, pasina zvipingaidzo kunze kwekuisa iyo application inowanikwa mahara. Ichi chishandiso chiri nyore kwazvo kushandisa uye chinotipa mukana wekubvisa Chrome, icho browser icho chakanyatso nyatso gadzirirwa OS X uye iri rinenge rinotuka bhatiri rinodhonza.
Kugona kushandisa Chit-Chat kupinda kuburikidza iyi link kufaira rekuburitsa, ingoendesa iyo ChitChat faira kune iyo app dhirowa muKutsvaga uye kuvhura iyo app. Paunongotora iyo QR kodhi otomatiki WhatsApp Web ichave ichiwanikwa mune ino application neinofadza interface yakafanana neiyo yeWhatsApp yeIOS, sezvatamboreva, hazvizove zvakafanira kuti ubatanidze mudziyo zvakare, zvinobva zvangoerekana zvaitika apo yako iPhone neMac yako zvakabatana kune imwecheteyo netiweki yeWi-Fi, zvichitibvumidza kuti titeererewo manzwi ezwi akatambirwa uye titumire akajairwa multimedia mafaera anotsigirwa neWhatsApp.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » WhatsApp Webhu, ongororo yakaoma uye mashandisiro eChitChat
Davo dufreak akadaro
Pindura Davo Dufreak
Ndokumbirawo uve nenjere mumashoko ako kuti iwe usawane fan boy ...
"Vakasarudza kupa pekutanga kune vamwe vashandisi uye nokudaro kurerutsa mutoro pamaseva" mangani makomputa ane iOS aripo anopesana neiyo Android + Windows + yapfuura….
Zvamunotaura Miguel zvinoita kunge zvisiri chaizvo kwandiri. Ini zvakare ndinoshandisa WhatsApp Web kwenguva yakareba neakakodzera tweak uye zviri pachena kuti zvese ne tweak (sezvazvino) iko kushanda kunodzima maminetsi mashoma kana iyo iyo iPhone skrini yakavharwa. Iko kukanganisa kuri pachena kurara neWhatsApp yemhando yekumisikidza yeWebhu kunyorera, asi zvinoita sezviri pachena kwandiri kuti dai vasina kuivhura zvisati zvaitika nekuda kwenyaya yekudzima sezvo pakanga pasina kuita chaiko uye kwete nekuda kwecrocrocho, ikozvino vakaivhura kunyangwe hazvo dambudziko harisati ragadziriswa, asi chokwadi ndechekuti ndinofunga imhaka yekuti havasisina imwe nzira kunze kwekunge vaita imwe nzira yekushandisa sevhisi kana Apple inoshandura nzira inobatwa multitasking muIOS (iyo zviripachena kana zvikaitika hazviite neWhatsapp).
Kutenda nekutaura nezve ChitChat, zvave kubatsira….
Carlos Ernesto akadaro
Ndinoda kuziva mashandisiro wa pane yangu iPad isina chip foni. Zvinogona?
Pindura Carlos Ernesto
pane chichat kune shirikadzi?
Rafa Valdes akadaro
Kana ndichivhura chitchat inondiudza kuti WhatsApp webhu inoshanda neSafari kubva mushanduro 7 (uye ndine 8.0.1), saka handikwanise kuitisa kuti ishande, chero mazano?
Pindura kuna Rafa Valdés
antonio vazquez akadaro
Chokwadi vane chikonzero chekuti munyori wechinyorwa HAZIVI.
Uye sezvo iye asingazvizive, pachinzvimbo chekufunganya nezvekuziva kuti chikonzero ndechei, anofunga nezverangano yekambani iyi kupokana neApple, nekuti ndicho chinhu chekambani yese: kumisikidza Apple. Aihwa?
Ndinofunga Apple yakatokuvadza pachayo. Kukundikana neSLOW MacBook, ine iWatch isingadiwe nemunhu mushure mesvondo rekutanga, iine iPod yakafa kwemakore.
Sezvo Mabasa akatsakatika Apple inofa zvakare zvishoma mazuva ese.
Pindura kuna antonio vazquez
Sekutsanangura kwaunoshanda naye pamusoro: Apple zvishandiso zvine yakaderera huwandu hwendangariro zvekuti maapplication anofanira kunge Akavimbiswa, haakwanise kumhanya kumashure; uye kupa manzwiro e "multitasking" iyo sisitimu inomanikidzwa kuvhura nekuvhara ivo nguva dzose.
Kana izvozvo zvikaitika Anwendung inodonha.